Macron: Uma dulqaadan karno faragelinta Turkiga ee Libya
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in aanay u dulqaadan karin faragelinta militeri ee uu Turkigu ka wado dalka Libya, waxaana uu ku eedeeyey in Ankara dheeleyso cayaar khatarteeda leh.
Macron waxa uu sheegay in uu u caddeeyey madaxweyne Erdogan in uu Turkigu ka horyimid dhamaan hishiiskii lagu gaadhey Berlin iyo cunaqabateyntii hubka ee Qaramada Midoobay, meel khalad ahna uu kubadda u laadayo.
Turkiga ayaa taageera dowladda caalamku aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay caasimadda Tripoli, halka Faransiiska ay ka mid yihiin dalal dhowr ah oo garab siiya jeneral Khaliif Xaftar oo ciidankiisa ay haystaan Bariga Libya.
Halkee ayey haddba xaalada Libiya mareysaa? Waxaa warbixin ka diyaariyey Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.